Faankishiinoonni tiriigoomeetirikii armman gadii bu'uura LibreOffice keessatti deeggaramu.
Faankishinoota Eksipooneenshaalii fi Logaarizimii
Bu'uurri LibreOffice Faankishinoota Eksipooneenshaalii fi Logaarizimii armaan gadii deeggara.
Lakkoofsota tasa uumuu
Himiinni fi Faankishinoonni armaan gadii lokkofsota tasa uumu.
Shallaggii iskuweer ruuttii
Iskuweer ruuttota shallaguuf faankishinii kana fayyadami.
faankishiniin armaan gadii gatii gara itergaatti siksuuf.
Faankshiniin kun gatii gonkaa deebisa.
Faankishiiniin kun ballaccee aligeebiraa himannoo lakkofsa deebisa.
Faankishinoonni armaan gadii lakkoofsota dhangii lakkoofsa tokko irraa gara birootti jijjiiru
Title is: Faankishinoota lakkofsaa